Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "shongwe", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "shongwe", iro shamwari manzwiro?
Card of "shongwe" 3500 Yen kune zvinoreva
nyanzvi kufembera ari neizvi nzvimbo kwave nezvavo savakuru Tower (shongwe) nenzira
Chirungu usununguke yokunyatsoongorora "shongwe" ari rusvingo guru pamberi ziso zvinoratidza kuti iwe unorarama. Kana kadhi iri anobuda, nekuti zvakanaka anotarisirwa kuguma kukundikana kuti haana kuenda zvakare kuedza, zvingava nani kuti tidzivise kuita chisarudzo chinokosha uye sarudzo iri murudo.
somuenzaniso, Toka kureurura ake rusina kukwana mberi rudo, akadai wekuedza aitaura kuroorana uye vanoda kuziva manzwiro ake vari kufambidzana, chiito kuti vakatarisana zvisarudzo zvakakura, akadai richichinja guru nokuyerera wematambudziko, nguva ino It ingangova haashandi.
Zvisinei, achitaura kubudirira kana kuti verengera, nekuti hapana nzira Ndokusaka, panguva, ngatitaurei taurawo kurega zvinhu zvauri kufunga uye ini angaedza kupikisa pasina kutongwa.
yakanaka nzvimbo nemamwe webato manzwiro
"shongwe" kuti zvinofanirwa kureva zvakanaka nzvimbo "shongwe" ndiko, aizova ezvinhu aripo nhasi rakabayirwa, mune kunaka kutenderera kuva simbe kunyange kana chii iwe kana netsaona kuwana, Tachihadakari rusvingo guru kana chipingamupinyi pamberi pemaziso, kana kuti tisuwe kuti haugoni kuita chinhu ari yayo, chinomirira kuti vaizotsauswa mwoyo kwakadaro pachangu. Ndizvo rudo, akarwadziwa kana mashoko ake nezviito, sezvaanogona une pezvaitika, zvingangoita kuitika achipfuura naye.
ndiye kuvapo iwe chinokosha ndechokuti iye, kana vari kutsvaka mafaro hazvingavipo, ndiyo nguva wamunotsvaka chinhu chakasiyana. Haasisina kufungira manzwiro ake panyaya manzwiro vaviri, vanhu rusina kukwana mberi rudo kuri nani kurega kupupura.
"shongwe" iri kadhi iri anokumhan'arira manzwiro
zvinopesana neizvi nzvimbo Vanzveri rinoreva "shongwe", zvinoreva kuti pane rusvingo guru Pari pamberi ziso Hongu iwe, asi kana wanga ari neizvi nzvimbo pane zvakanaka nzvimbo ndiko mamiriro makavhara vakadaro Happo, zvinoreva kuti aibuda muupenyu hunotanga.
kuguma zvinorwadza zvikuru mamiriro ezvinhu anosvika nayo, kuti aende kuna pakutevedzera zvakanaka, ungada kurega amene kupinda chekubuda.
parudo, inonyunguduka inopfuura uye kusanzwisisa pamwe naye, manzwiro ake chiratidzo kudzoka zvakare kuti Eks. Kana kuva ukama hwakanaka, dzakadai chinhambwe mumwe anosvika pane rimwe danho, tinogona kutarisira kuchinja vanofara ezvinhu.
kubvuma chekubuda yakadaro guru mugumo, nokuda vanoita pamberi pasina kutya kuchinja, unogona kuenda kuvhura muupenyu hutsva kuzoshanyira pachako. Pakadaro, kurasa pfungwa akadaro neururami akanga kusvikira zvino, ngatiedzei kubvuma pamberi chokwadi ziso.